YAA SOOGIDDAA ! YOO OFII JETTEE …. YAA HALGAA ! YOO BORIIF JETTEE… -
SEENAA Y.G(2005) kutaa 3ffaa fi xumuraa
Sabnii Qabsoo farra kolanii gaggeeffatu , yeroo hundaa humnasaa beekee tarkaanfatuu qaba. Humnasaa beekuuf dubbiin jalqabaa gurmuun ykn adeemsa ofii walteffachuu gaafata. Kun hedduu murteessaadhaa. Maal barbaannaa ? bakka barbaannu bira akkamiin HALGAA geenyaan ? yeroo hundaa gilgaalamee qophii barbaachisuus irratti godhamee, humnatti geeddaramuu keenya diinaaf hojiidhaan labsachuun murteessaadhaa. Sadarkaan Qabsoon Saba Oromoo irra jiru isa kanadha. Wayyaaneen gonkumaa qawwee malee ykn humnaan alatti Angoo gadhiiftii jechuun waan danda’amuu miti. Humna qofaatuu waa hundaatti isaan fida. Kun Saba Oromoo biratti akka walii galaatti fudhatama argatee, guyyaa irraa gara guyyaatti qabsoo isaa fi falmaa isaa jabeeffachaa jiraachuun ifa. Oromoon baayyina isaa humnatti jijjiiree tarkaanfii isa dhumaatti ce’uu jechuun , kan qawween itti itti roorrisu irraa of baraaruuf ka isaaf hafuu qawwee kaasuu qofaadhaa. Adeemsa Qawwee duraa waggoota muraasa keessatti fixateera. Ummati keenya gamtaa isaa sadarkaa eenyullee daddaaquu hin dandeenye irraa ga’atee jira. Oromoon bitamtoota ykn gantoota sabaa diina qixxee adabuuf waan barbaachisu hundaa xumuratee jira. Adeemsa qabsoo sadarkaa akkasii irra jiru gara fuula duraatti furgaasanii galmaan ga’uuf, kan gara fuula duraatti hojjatan irra, waan irra geenye kanarraa duubatti akka hin deebineef irratti hojjachuutuu , Kaayyoo keenya galmaan ga’aa.
OPDO fi HIWAHAATONNI shira addaan wal ta’anii , ilmaan Oromoo haala argamee hin beekneen hiraarsaa, ajjeesaa fi Biyyaa baasaa jiran. Wayyaaneen jaallannus jibbinuus, harka isaaniin gara hammeenyaatti nu harkisaa jiran. Shirri wayyaanee guyyaa guyyaan daawwachaa jirru, Oromoon obsa isaa akka fixatuuf ka afeeraniidhaa. Yeroo tokko tokko hegaree siyaasa ofiif jedhemee, miidhaa guddaa callisanii ilaalalani bira dabruun ni jira. Wayyaaneen garuu , mee qabsaa’oonni keessan isiniif qaqqabnaa jedhan eessa jiru ? jedhanii ummata mufachiisuuf hammeenya hiriyyaa hin qabnee raawwachuutti jiran. Kun hedduu nama aarsuu fi abdii nama kutachiisuu mala. Garuu waa hundaan dura waan irratti hojjatamuu qabu hojjatamee Ummata keenya qopheessuun fardii waan ta’uuf, ammallee hammeenyaa fi shirri wayyaanee hammaatus, Oromoon wal ijaaree sadarkaa qabsoo Oromoo isa xumuraa bira ga’uuf foolachaa jirutti makamuuf dhalli Oromoo hundi of qopheessuu qaba.
Dhalli Oromoo qaama hawaasaa kamuu haa ta’uu , bakka jiru taa’ee gumaacha bilisummaan irraa barbaachiftuu taasisuuf, inni duulee fi qabsaa’ee wayyaanee konkolaachisuu barbaaduus karaa isaa danda’ameen gurmaa’ee , meeshaa barbaachisa taanaan meeshaan of utubee gama hundaan of qopheessuun haalaan barbaachisaadhaa. Diinni keenya Oromoo qalbiin tarkaanfataa jiru, akka sodaatti ilaaluu ega eegalee bubbuleera. Oromoo dubbii ilaallachaa tarkaanfataa jiru, akka walii galtee hin qabneettii fudhatee tuffachaa jiraachuu taajjabaa jirra. Ormoon tarkaanfii amma irra jiru maaliif akka dursaa jiru, Oromoo qofaatu beeka.Oromoon akka sabaatti waan sodaatu hin qabuu. Hammeenyi wayyaanee kamiyyuu Oromoo kanarra yoo finiinsee malee, gonkumaa duubatti ka isa deebisuu miti. Har’aa galii keenyaaf jennee waan obsinuu hundumtu yeroon itti dhumachuu maluu dhaqabuu danda’aa. Ummati osoo hin ijaaramnee akka ummataatti qabsoof ka’uu fi wal kaasuun miidhaa isaatu caalaa. Har’aa achirra hin jirru. Qabsoon keenya gaafa qawwee baadhatan qofaa fuula guduunfuun hin ibsamuu. Namnii bilisummaa hin qabnee gammachuu hin qabuu. Namnii gabrummaa jala jiru karaa gammachuutti of hin gawwamsuu. Bilisummaan bilisummaadhaa. Gabrummaan gabrummaadhaa. Qabsoon Oromoo guyyaa irraa gara guyyaatti hadhaa’aa ka dhufeef, ilmaan Oromoo ejjannoo kanatti amanaan guyyuu baayyachaa fi humnatti jijjiiramaa dhufuu irraatii.
Sabnii hidhii xuuxuu fi ajjeefamuu , akkasumasa hidhamuu isaa lallabataa jiraatuu gokumaa gabrummaa jalaa hin ba’uu. Waggaa 100 duraa kaasee hidhamaa fi ajjeefamaa jirra. Gabrummaa isa ija baaseetti ca’aa jirra. Kanaaf ajjeechaan kaleessa nurratti raawwatamee, hidhaa fi hiraarriin kaleessa nurratti raawwatamee fi har’aa nurratti raawwatamaa jiru gonkumaa garaagarummaa hin qabu. Kaleessas nu ajjeesuu har’aas nu ajjeesu. Kaleessa nu hidhuu har’as nu hidhaa jiran. Kaleessa biyyaa nu baqachiisanii dachee keenya dhuunfachaa turan. Har’as akkasuma. Kanaaf , har’aa wareegama guutummaa Oromiyaa keessatti argaa jirrun guyyuu waliif labsuurra, wareegama kana dhaabuuf murannoon hojjachuutu furmaata. Ilmaan Oromoo 700 ol guyyaa tokkotti guyyaa irreechaa gaafa dhuman, maraachuu geenyerra. Har’as kudhanii fi shaniin ajjeesaa jiran. Kanuma waliif gabaasaa jirra. Garuu gumaan 700 fi waggaa 100 guutuu hin baafamiin jira. Sochiin keenya kanarratti ta’uu qaba.kana irratti hojjachuu qabnaa. Du’ii ho’aa fi qabbanaa’aa ta’ee nama kakaasuu fi nama laaffisuu jiraachuu hin qabu. Du’aa fi hiraarriin nurratti raawwatamuu, yeroo hundaa ajandaa akitivistootaa ta’ee dhihaachuu hin qabu. Sagalee ittiin sassaabbachuuf olfachuu hin qabnuu. Gubannee, maraannee, waadame keessi keenya yoo jennee maal bu’aan isaa ?
Diinni ka nu ajjeesuu filannoon qabu isa qofaa jedheeti. Dhumni isaa maal akka itti fiduu isaaniif dhiisaa, nuuti ammo du’uun filannoo keenya isa dhumaati jennee fudhannaan hedduu dogoggorree jirra. Diinni of baraaruuf nu ajjeesa. Nuuti ammo of baraaruu diinaa jabeessuuf callifnaa. Of baraaruutti ce’uuf hojiilee hojjataman gamanumaa irratti haa hojjannu. Yaa soogiddaa yoo ofii jettee…… fi yaa halagaa yoo ofii jettee…. Jedhee kanan katabee, Adeemsi har’aa kun, gaaf tokko galgala tokkotti jijjiiramuu akka danda’uu waanan itti amaneefii . qabsoo Oromoo akka kaleessaa qilleensarra eegaa jirtu yoo ta’ee hedduu gawwamaa jirtuu. Qabeenyaa lafarra guuttanitti abdattanii yoo ta;ees gonkumaa hegaree keessan irraanfattan jechuufii. Ilmaan Oormoo waamicha qabsoo gama hundaan balbala tokkon tokko dhala Oromoo irra ga’ee jiruuf of qopheessuu fi gumaacha ofii taasisuuf akka of qopheessaniif. Waan Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru , guyyaa tokko haala hin eegamneen shaffisee waan hin eegamnee gadi baasuu danda’aa. Haala umamu kanaan diinatu miidhamuu qaba malee, Ummati keenya miidhamuu hin qabuu. Kana irraa baraaramuuf ammo , guyyuu waan raawwatamaa jiru faana dhawuu fi qindoomiina jiru hordofuutuu murteessaadhaa.
Bakka jirutti dhalli Oromoo qaamaa qalbii wal haa dhaggeeffatu. Waamicha harmee gaaf tokko nu dhaqabduuf koomeerra of taa’uun barbaachisaadha. Qawween Oromoof, Cumboo , Cuukkoo, Caccabsaa, Micciirraa, Aanan, Uffata aadaa isaa yeroon itti ta’uu fagoo miti. Waan sana dhuggeessuuf waan barbaachisuu Oromoon hojiin argisiisee jira. Boorsaan barnootaa fi kitaabnii barnootaa qawweetti yoo jijjiiramee, warruma bilisummaa barbaachaa kooleejii keessaa yaa’ee Angotti dhuufeetu nu dirqisiisee nurra hin ilaaliinaa. Oromoo kanatti oofaa ka jiru, warruma qawweetti amanuudhaa. Qawween Oromoof egaa maaliidhaa ? jedhanii yennaa gaafatan, AADAA dha JENNEE yeroon DEEBIFNUU dhihaateeraa of qopheessaa .
Yaa Sogiddaa yoo ofii jettee ……
Yaa halagaa yoo ofiif jettee ……mata duree bareechuuf ka filamee miti. Yerooma isaati.
HORAA BULAA !!!!!!!!!